के तपाई ढाड दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन समाधान गर्ने उपायहरु – Jagaran Nepal
के तपाई ढाड दुखेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन समाधान गर्ने उपायहरु
अचेल धेरैलाई ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ । थोरै केही काम गर्योकी ढाड दुखी हाल्छ । खासमा उचित व्यायाम नगर्नाले र बसिरहदा ढाड दुख्ने समस्या देखा पर्छ ।चिकित्सकहरु ढाड विभिन्न कारणले दुख्ने बताएका छन् । पेटको समस्या,पिसाबको संक्रमण ,मिर्गौला सम्बन्धी समस्या,मेरुदण्डको क्यान्सर ,सुत्दा नमिलेरवा सुतिरहदा पनि ढाड दुख्ने गर्छ ।